Youtube Incognito Mode ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။ ➡️➡️နောက်လိုက်များ▷➡️
မေလ 12, 20210မှတ်ချက်များ 522
YouTube မှာ ၄ င်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေထဲမှာ incognito mode ပါဝင်တယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား။ ဒီ tool ကဘာကိုဆိုလိုတယ်၊ ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုသင်မသိရင်၊ YouTube ရဲ့ incognito mode အကြောင်းနဲ့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဘယ်လို activate လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြမယ့်နောက်ဆောင်းပါးကိုဖတ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဒါကတစ်ခုဖြစ်တယ် ယူကျုးဘ်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှပေးသောအကောင်းဆုံးကိရိယာများ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်လူကြိုက်များသောဗီဒီယို streaming ပလက်ဖောင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသည့်အကြောင်းအရာကိုခြေရာခံရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ ငါတို့နဲ့အတူနေပြီးဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်ကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ။
Youtube incognito mode ဆိုတာဘာလဲ
Youtube သည်မကြာသေးမီက၎င်း၏မိုဘိုင်း application အတွက်ဒီ option အသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည် အသုံးပြုသူများသည်သူတို့လိုချင်သည့်အချိန်တွင်၎င်းကိုဖွင့်နိုင်သည်။ incognito mode သည်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပလက်ဖောင်းမှကြည့်ရှုနေသောဗွီဒီယိုများအားလုံး၏သမိုင်းကိုသိမ်းဆည်းခြင်းမှတားဆီးသည်။
Youtube ၏ incognito mode ကိုဖွင့်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတွင်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းမသိမ်းဆည်းပါနှင့် ငါတို့မျိုးပွားနေကြတယ် ထို့အပြင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ
ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? YouTube အပလီကေးရှင်းမှစတင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တားဆီးပါမည် ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်းကြည့်ရှုခဲ့သည့်အကြောင်းအရာနှင့်ဆင်တူသည့်အကြောင်းအရာကိုအကြံပြုပါ စင်မြင့်ပေါ်မှာ။ ယခုတွင် YouTube ၏အကြံပြုချက်များသည် ပို၍ ယေဘူယျဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ပြီးတာနဲ့ YouTube ရဲ့ incognito mode ကိုလည်း activate လုပ်တယ် ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းသွင်းထားသည့်လိုင်းများ၏ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်မည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုစတင်သောအခါ Subscriptions, Inbox နှင့် Library tabs များကိုလည်းပိတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
incognito mode ကိုသက်ဝင်စေဖို့အဆင့်များ
ကောင်းစွာ။ incognito mode သည်ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုငါတို့သိပြီနောက်သင်ကသင်ပေးပါမယ် ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိရိယာကိုသက်ဝင်စေဖို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်း ၎င်းသည်၎င်း၏မိုဘိုင်း application တွင် YouTube ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
ရှင်းလင်းဖို့ပထမ ဦး ဆုံးအရာဖြစ်တယ် ဤအင်္ဂါရပ်ကိုမိုဘိုင်းအက်ပ်အတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်, ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် desktop ဗားရှင်းမှ၎င်းကိုသက်ဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အောက်ပါအဆင့်များမှာ -
ဖွင့်လှစ် သင့်မိုဘိုင်းပေါ်ရှိ Youtube application
သင်သည် Account menu သို့အလိုအလျောက်သွားလိမ့်မည်။ အဲဒီမှာသင်သည်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ် configuration များ.
ယခုသင်ရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ။incognito mode ကိုဖွင့်ပါ"
incognito mode ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
incognito mode ကိုဖွင့်ရန်သင်အလွန်လွယ်ကူသလား။ ဤကိရိယာကိုရပ်တန့်ရန်မည်မျှရိုးရှင်းပြီးမြန်ဆန်သည် မိုဘိုင်း application ကနေ။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့်အဆင့်များအကြောင်းကိုရှင်းပြသည်။
သင်၏ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ၎င်း၏အရပျ၌ဖြစ်လိမ့်မည် incognito mode သင်္ကေတ.
ထိုအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "incognito mode ကိုပိတ်ပါ"
ဒါကသင် incognito mode ကိုမှရပြီဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာပါပဲ ယခုတွင်သင်သည်လျှောက်လွှာသည်သင်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှသင်ကြည့်နေသောဗီဒီယိုများ၏သမိုင်းအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
1 Youtube incognito mode ဆိုတာဘာလဲ
2 incognito mode ကိုသက်ဝင်စေဖို့အဆင့်များ
3 incognito mode ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ